Archives Humanism - Sword Cross sy Crown
Ny voankazo marina dia avy amin'ny fanarahana ny voaloboka marina
Janoary 8, 2018 sklindsey
Ny tena Voankazo dia avy amin'ny Fitoerana ao amin'ilay Voaloboka Marina ihany no nilazan'i Jesosy tamin'ny mpianany fotoana fohy talohan'ny nahafatesany hoe: “'Tsy hiresaka betsaka aminareo intsony aho, satria ho avy ny mpitondra an'izao tontolo izao. [...]
Mitoera ao amin'ny voaloboka, na mitoera ao amin'ny afo maharitra mandrakizay… inona no hofidinao?
Oktobra 7, 2017 sklindsey
Mitoera ao amin'ny voaloboka, na mitoera ao amin'ny afo maharitra mandrakizay… inona no hofidinao? Jesosy dia nanome ny mpianany sy antsika rehetra fampitandremana mafy rehefa nilaza toy izao izy: "'Raha misy tsy mitoetra ao [...]
Jesosy dia ilay voaloboky marina amin'ny fitiavana sy fifaliana ary fiadanana
Septambra 21, 2017 sklindsey
Jesosy no hany voaloboka feno fitiavana, fifaliana ary fiadanana Fotoana fohy talohan'ny nahafatesany, dia nilaza tamin'ny mpianany i Jesosy hoe: "'Izaho no tena voaloboka, ary ny Raiko no mpamboatra tanimboaloboka. Ny sampana rehetra [...]